आज सरकारले ८ खर्ब २५ अर्बको बजेट ल्याउँदै – YesKathmandu.com
आज सरकारले ८ खर्ब २५ अर्बको बजेट ल्याउँदै
मङ्गलबार २९, असार २०७२
काठमाडौं । सरकारले यस आर्थिक बर्षमा ८ खर्ब२५ अर्बको बजेट ल्याउने तयारी गरेको छ । आज ब्यवस्थापिका संसदमा प्रस्तुत गरिने बजेटमा भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण र सामाजिक सुरक्षालाई बढि प्राथमिकता दिएको छ । विनाशकारी भूकम्पबाट क्षति भएका संरचना पुर्ननिर्माणका लागि सरकारले ९० अर्ब रुपैया बिनियोजन गरेको छ । तर राष्ट्रिय योजना आयोगले भने पुर्ननिर्माणका लागि ७ खर्ब लाग्ने अनुमान गरेको छ । भूकम्पको कारण देखाई कर्मचारीको तलवमा भने यो बर्ष बृद्धि नहुने भएको छ । तर सभासद्लाई दिइने रकम भने डेढ करोड पुग्ने अनुमान गरिएको छ । बृद्धभत्ता दोब्वर बनाउने योजना सरकारले अघि सार्ने भएको छ ।
बजेटको स्रोतमा चार खर्ब ७८ अर्ब राजस्वबाट आउनेछ भने वैदेशिक अनुदान तथा ऋणबाट दुई खर्ब एवं आन्तरिक ऋणतर्फ ८५ अर्ब रुपैयाँ जुटाइनेछ । अपुग रकम चालू वर्षको बचत रकमबाट व्यहोरिनेछ। पुनर्निर्माण, पूर्वाधार, कृषि र ऊर्जालाई विशेष प्राथमिकता दिएर बजेट विनियोजन गरिँदैछ। पुनर्निर्माण प्राधिकरण गठन गरी सोहीमार्फत भूकम्पबाट क्षति भएका संरचनाको निर्माण कार्य अघि बढाइने बजेटमा उल्लेख हुनेछ।
कोशी नदीमा डुंगा डुब्यो, १६ जना बेपत्ता
नेविसंघ अध्यक्ष रञ्जित कर्णलाई कालोमोसो दल्ने बिरुद्ध मुद्दा दायर
राष्ट्रपतिको चीन भ्रमणमा ९० लाख खर्च, राजा जतिकै भ्रमणभत्ता
आर्थिक योजनाकार शाक्यको किर्ते नागरिकता !
१४ महिनाभित्र ९५८ मेगाबाट बिद्युत थपिने, बर्षायाममा लोडसेडिङ अन्त्य
१० खर्वको ‘पपुलिष्ट’ वजेट आँउदा को को पर्लान ‘मुर्छा’ ?
अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजनाको कार्यमा जग्गा प्राप्ति र मुआब्जा वितरणमा समस्या देखियो
सवै सवारी साधनलाई आज सवै डिपोबाट इन्धन वितरण
चीनसँग टाढिएकै हुन् ओली ? के–के छन् भित्री खेल ?
फुलमाला लगाएर प्रचण्डले भित्राए माओवादी पार्टीमा अर्काे बहुपत्नीवाला !
प्रधानमन्त्रिको पक्षमा मतदान गर्न एमाले र माओवादी केन्द्रको ह्वीप
प्रधानमन्त्री स्वदेश फिर्ता,अमेरिका र ओमानको भ्रमण उपलब्धिपूर्ण भएको दावी
भारतीय जासुसी संस्थासँग अन्तिम छलफल गरेपछि प्रधानमन्त्रीले निर्वाचन सारे